बाढीपहिरोको कहालीलाग्दो शृंखला, मुख्य कारण जथाभावी खनिएका सडक « Postpati – News For All
बाढीपहिरोको कहालीलाग्दो शृंखला, मुख्य कारण जथाभावी खनिएका सडक
भदौ २६, काठमाडौं । यस वर्षको मनसुन अवधिमा हालसम्म मुलुकभर बाढीपहिरोका कारण २ सय ८५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । बाढीपहिरोका ५ सय ७ घटनाको मुख्य कारण नै अव्यवस्थित रूपमा निर्माण गरिएका ग्रामीण सडक भएको पाइएको छ ।
स्थानीय तहले बिनाइन्जिनियरिङ डोजर लगाएर निर्माण गरेका ग्रामीण सडक नै पहिरोको मुख्य कारण भएको भूगर्भविद्ले बताएका छन् । यस वर्षको मनसुन गत १२ जुनमा भित्रिएलगत्तै मुलुकभर सक्रिय भएको वर्षाले ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयको आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका अनुसार यस वर्षको मनसुन अवधिमा पहिरोबाट २ सय ४९ र बाढीबाट ३६ जनाको ज्यान गएकोे छ । केन्द्रका अनुसार पहिरोमा परी ४९ जना र बाढीले बगाएर ३५ जना बेपत्ता भएका छन् ।
मनसुन अवधिमा ४ सय २८ ठाउँमा पहिरो गएको थियो । पहिरोका कारण ६ सय ६४ परिवार प्रभावित र १ सय ९० जना घाइते भएको केन्द्रले जनाएको छ । यसैगरी, मनसुन अवधिमा ७९ वटा बाढीका घटना भएको केन्द्रले जनाएको छ । बाढीबाट ४ सय ६४ परिवार प्रभावित भए भने ९ जना घाइते भएका छन् ।
मनसुनको समयमा विगतका वर्षभन्दा यस वर्ष जनधनको क्षति बढी हुनुको मुख्य कारण ग्रामीण सडक भएको भूगर्भविद्ले बताएका छन् । ‘बिनाइन्जिनियरिङ निर्माण गरिएका ग्रामीण सडक भएका स्थानबाटै पहिरो गएको छ,’ भूगर्भविद् डा. सुबोध ढकालले भने, ‘हामीले विगतदेखि नै बिनाअध्ययन गरिएका सडक निर्माणले नै जोखिम निम्त्याउने विषयमा आवाज उठाउँदै आए पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।’
पटक पटक सरकारलाई सुझाव दिँदासमेत स्थानीय सरकारले जथाभावी सडक निर्माण गरेकाले अहिलेको विपत्ति उत्पन्न भएको उनी बताउँछन् । विपद्को पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजना प्रभावकारी हुन नसक्दा जनधनको ठूलो नोक्सानी हुने गरेको विपद्विज्ञहरू बताउँछन् । नेपालमा प्रतिवर्ष विभिन्न विपद्बाट सरदर औसतमा १ हजार जनाको ज्यान जाने गरेको छ ।
जसमध्ये वार्षिक ३ सय जनाको मृत्यु बाढीपहिरोका कारण हुने गरेको छ । यस वर्ष मनसुन सुरु भएयता १ सय १४ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने ४३ जना बेपत्ता छन् । सबैखालका विपद् गरेर नेपालले हरेक वर्ष औसतमा १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँबराबरको नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ ।
अनौठो लाग्दो कुरा के छ भने नेपालमा विकासको दर ३ देखि ४ प्रतिशत रहेको छ भने विभिन्न विपद्ले विनाश गर्ने दर ८ देखि २५ प्रतिशतसम्म हुने गरेको विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछ ।
अघिल्लो वर्ष बाढीपहिरोका कारण १ सय ५६ जनाले ज्यान गुमाए । १ वैशाख २०७६ देखि चैत मसान्तसम्ममा नेपालमा बाढी र पहिरोमा परेर १ सय ५६ जनाको ज्यान गएको थियो । अहिलेको मनसुन बलियो भएर आएकाले जोखिम पनि बढी नै हुने भूगर्भविद् डा. ढकाल बताउँछन् ।
‘बलियो मनसुन भएमा १४० मिलिमिटर वर्षा हुँदा पहिरो जाने सम्भावना हुन्छ,’ उनले राजधानीसँग भने, ‘सक्रिय मनसुन भएमा पहिरोको जोखिम बढी हुने गरेको छ । भौगर्भिक बनोट पनि कमजोर हुनु र सडक निर्माण गर्दा जोखिम मापन नगरिनु नै समस्याका रूपमा रहेको छ । मनसुन बढेसँगै पहिरो बढ्नेछ ।’
उनले ग्रामीण सडक प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्माण गरेकाले त्यस्ता सडक नै बढी जोखिममा भएको बताए । यसैगरी, लामो समयदेखि भौगर्भिक अध्ययन गरिरहेका भूगर्भविद् डा. रञ्जनकुमार दाहाल पनि विगतको तुलनामा यस वर्ष बढी नै बाढीपहिरोको घटना हुने बताउँछन् ।
‘अहिले कोभिडका कारण ग्रामीण सडकमा नालाहरू सफा गर्न सकिएको छैन । यसले जोखिम बढ्न सक्छ,’ उनले राजधानीसँग भने, ‘सवारी अवरुद्ध हुँदा सडक जीर्ण बनेका छन् । अहिले पश्चिम नेपालका जिल्लामा सडक बिग्रँदै गरेको मैले नै अध्ययन गरेको फर्केको छु ।’
उनले सबैभन्दा बढी जोखिम ग्रामीण सडकले नै निम्त्याउने गरेको बताए । सरकारले प्राधिकरण बनाए पनि त्यसले पूर्ण रूपमा काम गर्न सकेको छैन । नेपालमा पहिरोसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणाली लागू नभए पनि त्यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको प्राक्टिकल एक्सन नेपालले भने बझाङ र बाजुरामा प्रारम्भिक प्रयासको परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।
सोही विषयमा अनुसन्धान गरेका जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापनविद् डा. धर्मराज उप्रेतीले सबै स्थानीय तहको पहिरोसम्बन्धी जोखिम वर्गीकरण गरेर कुन भू–बनोटले कति पानी थेग्न सक्छ भन्ने विषय अध्ययन गरी पूर्वसूचना प्रवाह गर्न आवश्यक रहेको आँैल्याए ।
‘मौसमसम्बन्धी पूर्वानुमान भइरहेको छ, कुन स्थानमा कति पानी पर्न सक्छ भनेर ३ दिनअघि नै थाहा हुन्छ । यदि भू–बनोटको अवस्था थाहा भयो भने त्यो भू–बनोटले कति पानी थेग्न सक्छ भन्ने पनि मूल्यांकन गर्न सक्छौं । यसका आधारमा पहिरोको जोखिम थाहा पाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘पहिरोको जोखियुक्त स्थान पहिचान गरेर सर्वसाधारणलाई सचेत पनि गराउन सक्छौं । पहिरो जाँदा कुन स्थानतिर जानुपर्छ, कसरी जोगिने ? पूर्वतयारी कसरी गर्ने भनेर जतिसक्दो चाँडो पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ अनि पहिरोबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।’ यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा सविन शर्माले लेखेका छन् ।
२०७७ भाद्र २६,शुक्रबार को दिन प्रकाशित